Injeniera AIMIMA : tsy miasa ho an’ny harena an-kibon’ny tany ihany | NewsMada
Injeniera AIMIMA : tsy miasa ho an’ny harena an-kibon’ny tany ihany
Tsy azo ialana ny AIMIMA* na ny fikambanan’ireo injenieran’ny harena an-kibon’ny tany raha momba ny asa fampandrosoana eto an-toerana. « Miasa amina sampandraharaha maro ireo mpikambana ao aminy, koa tsara raha mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra mahakasika ny asa fampandrosoana », hoy ny filohan’ny fikambanana, Randrianarisoa Jean Romain.
Nandritra ny fifampiarahaban’ny AIMIMA, noho ny taom-baovao 2017, ny herinandro lasa teo, noresahin’ny mpikambana ny handrafetana sata vaovao, fanatsarana ny fifandraisana anatiny, atao mifanaraka amin’izany ny laminasa. Nampahalalana fa tsy miasa ho an’ny harena an-kibon’ny tany ihany ireo injeniera. Ahitana ny maro amin’izy ireo any amin’ny sehatra hafa, angovo, asa vaventy. Maro amin’izy ireo koa any amin’ny tsy miankina sy any anivon’ny faritra. Antsoina ireo mpitantana any amin’ny kaominina, faritra hiara-miasa amin’izy ireo ho fiarovana ny tombontsoan’ny any an-toerana. Manana adidy izy ireo mandray anjara mitondra ny heviny amin’izao atrikasa any amin’ny faritra momba ny lalàna harena an-kibon’ny tany izao.
Nasian-teny koa ny fandraisana anjara amin’ny fanatsarana ny fitrandrahana madinika izay hita fa be mpanao tsy ao anatin’ny fanarahan-dalàna. Heverina koa ny fampidirana ny solontenan’ny mpikambana ao anatin’ny komitim-pirenena momba ny harena an-kibon’ny tany (CNM) ; nohamafisina fa tsy afa-misaraka amin’ity sehatra ity ny fiarovana ny tontolo iainana. « Fomba fiasa vaovao faritan’ny AIMIMA izao ny fampiraisana ny tontolo iainana sy ny harena an-kibon’ny tany, hisian’ny fampandrosoana maharitra », hoy Randrianarisoa Jean Romain.
Raha nandray fitenenana kosa ny sekretera jeneralin’ny minisitera, Andriamparany Carl, nambarany fa “ tsy misy sehatrasa tsy ahitana olana. Ny harena an-kibon’ny tany ihany no asongadin’ny sasany ho tena olana fa vitsy mpahita na tsy lazaina mihitsy aza ny tombontsoa efa hita any Tsimiroro, vola ampidiriny, sns. Afaka mamaha tsara ny olana amin’ny tsy fahampian’ny angovo ny menaka mavesatra ao Tsimiroro, raha voasolo ireo milina ao amin’ny Jirama ».
AIMIMA* : Association des ingénieurs des mines de Madagascar.